heralokhabar::मौनतामा हुर्किएकाे प्रेम - heralokhabar
May 5, 2020 7:49 pm, हेरालाे खबर
के लेखुँ प्रिया तिम्रो लागि ? कुशल छु, कुशलताको काममा गर्छु । तिमीसँग कुरा नभएको ठिक आज चार वर्ष पुगेछ । आजभन्दा चार वर्षअघि आजकै दिन तिमीलाइ इमेल गरेको थिएँ । यो बिचको हाम्रो मौन अवधिलाई मैले तोड्ने हिम्मत गरेको छु आज । तिमीले आफुलाई मबाट सम्पर्क बिहिन भएकोमा गर्व गर्यौ होला । तर मैले दुखानुभुती गरें । प्रबिधिको यति सहज जमानामा पनि तिमी यसरी भुमिगत छौ कि लाग्छ, आफू जन्मिएको सालतिर बाँचिरहेको छौ ।
तिमीले मेरो लागि भन्दा नि परिवारको लागि यति ठूलो गुन लगायाै कि तिमीलाई बुहारीको रुपमा अपनाउने रहर लागे पनि तिमीसँग त्यो प्रस्ताव राख्न कहिल्यै सकेनन् मेरा बाआमाले । प्रिया तिमी उनीहरुका लागि धेरै माथी छौ र मेरो लागि त्यो भन्दा पनि माथी ।
केहि समयपछि मैले तिमीलाई बिर्सिएछु । चुरोट, रक्सी हुँदै मेरो एडिक्सन ड्रगसम्म पुग्न थाल्यो । तिमी, परिवार, पढाइ सबै मेरा लागी नौलो हुँदै गए । यस्तो दिनचर्यामा मैले दुई वर्ष फालेको पत्तै भएन ।
म जति नजिक हुन्थें तिमी त्यति टाढिन खोज्थ्यौ । बाटोमै देखेर बस्न लागेको मेरो प्रेम बाटोबाटै रित्तिन लागेको मलाई भान हुँदै थियो । बिस्तारै तिम्रो प्लस टुको क्लास सकिन लागेको थाहा पाउने बित्तिकै म निरास हुन थालें । तिमि बाटोमा देखिन छोड्यौ, तिमीले दिएको फोन नम्बरमा फोन लागेन । तिमी हरायौ । तिम्रो प्रेमको मलाई यस्तो आदत बसेको थियो कि म तिमीलाई नदेखि नहुने भयो । तर , तिमी देखिएनौ कुलतमा फसिरहेको मलाई फेरि प्रेमको नसाले गाँज्न थाल्यो । तिम्रो मप्रतिको बेवास्ताले म बिक्षिप्त हुन पुगें ।
बिस्तारै मेरो संगत फेरि गलत मानिसहरुसँग हुन थाल्यो । मैले बिचमा पढाई छोडें । मेरो दिनचर्या दिनानुदिन परिवर्तन हुँदै गयो । बेबारिसे लास जस्तै भएँ । केहि समयपछि मैले तिमीलाई बिर्सिएछु । चुरोट, रक्सी हुँदै मेरो एडिक्सन ड्रगसम्म पुग्न थाल्यो । तिमी, परिवार, पढाइ सबै मेरा लागी नौलो हुँदै गए । यस्तो दिनचर्यामा मैले दुई वर्ष फालेको पत्तै भएन । मेरो उपचारका लागि सबै बिधि अपनाइयो । तर, म निको भइनँ । यसमा डाक्टरको काम पनि तिमीले नै गर्यौ । दुई वर्षमा अस्तब्यस्त बनेको मेरो दैनिकी पुन: लयमा फर्कियो ।
तिमीभन्दा अठ्चालीस वर्ष बढी बाँचेको मान्छेको जस्तै जीवन दर्शन सिकायौ । तिमीले विश्वास नगर्ने दुई जवान युवा युवतीबिचको प्रेमबाहेक अरु सबै जीवन दर्शन मन पर्छन् मलाई । रिस र ईष्र्या नगर्ने, आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्ने, दु:खमा नआत्तिने, आफ्नो लक्ष्यप्रती दृढताका साथ लागिरहने । तिमी मेरो लागि एक स्त्री मात्र नभएर जीवन दर्शन पनि हौ प्रिया ।
तुम्ने सुधाराथा तुम्ने बिगाडा है, तुम्ने किया जो किया….
यो गीत खुब सुन्छु म अचेल । हरेक दिन तिमीले सुनाउँने जीवन दर्शन र मोटिभेसनले ममा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै गयो । बिस्तारै म अझैँ उर्जावान बनें । बाआमाले एउटा मात्र सन्तान जो मरिसकेको जस्तो थियो उहि छोरो फिर्ता पाएको महसुस गरे । भिड्भाड, आफन्त इस्टमित्रसँग नझ्याम्मिने, सामाजिक संस्कारको मतलब थिएन मलाई । अर्को अर्थमा भन्दा एन्टिसोसियल थिएँ म । तर, तिमीसँगको संगतले बिस्तारै फरक हुँदै गएँ । आफु, परिवार र नातागोतामा चिनिन थालें । तिमीले मेरो लागि भन्दा नि परिवारको लागि यति ठूलो गुन लगायाै कि तिमीलाई बुहारीको रुपमा अपनाउने रहर लागे पनि तिमीसँग त्यो प्रस्ताव राख्न कहिल्यै सकेनन् मेरा बाआमाले । प्रिया तिमी उनीहरुका लागि धेरै माथी छौ र मेरो लागि त्यो भन्दा पनि माथी ।
तीतो त्यसपछि मिठो बनेको मेरो जीवनको अनुभवबाट मैले आफुलाई अलग्याएर अष्ट्रेलिया आएको आज नौ वर्ष बितेछ । थाहा छैन तिमीसँग अब भेट हुन्छ हुँदैन तर, तिमीले सिकाएको सत्यताको पाठलाई मैले सदैव अनुशरण गरें भने मात्रै म एक निस्वार्थ प्रेमी साबित हुनेछु । जसको मुल्यांकनकर्ता केबल म स्वयं हुं । तिमीले मेरा लागि पुर्‍याएको योगदानको म सदैब कदर गर्नेछु । उहि तिम्रो अज्ञात प्रेमि ।